3 avril 2020 · déliremadagascar
Archives journalières 3 avril 2020
KAOMININA IVATO MIATRIKA NY CORONAVIRUS: Olona sahirana sy beantitra miisa 800 nahazo fanampiana
Fanomezan-tanana ny fitondram-panjakana. Tsy mitsahatra mikaroka ny fomba rehetra ahafahana manampy ny mponina indrindra fa ireo sahirana sy “marefo” ny ben’ny tanàn’ny kaominina Ivato, Randrianarisoa Penjy sy ireo mpiara-miasa aminy. Continuer la lecture →
Miainga amin’ny tsirairay ny hahafohy na hampiitatra ny fihibohana. Fihetsika tsotra kanefa mahaavotra ain’olona marobe ny fijanonana ao an-tokantrano. Continuer la lecture →
ADY AMIN’NY COVID-19 : Hitondra ny anjara birikiny ny Fiangonana Loterana Malagasy
Hifandrombonana ny ady handresena ny coronavirus. Tsy nitazan-potsiny ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM ) amin’izao ady amin’ny aretina covid-19 izao fa hitondra ny azony atao. Hisy tohana sy tosika ary fanampiana ho an’ireo olona marefo manerana ny nosy amin’ireo dispansera sy toby masina sahanin’ny FLM. Continuer la lecture →